Goldwyn ee Jinku naadi waxaa jira booska cusub video faraxgelinta ku shaqeeya by Microgaming oo ay la socdaan "Just for guul ka" bixiyaha software. Afyare waxay qaadataa Waxyooday Xagga xayawaan sixir cute- Jinku yar. The kulan Afyare cirfiid Kaapelitalo waa mid aad u badan caadi ah in dunida ka mid ah kulan Afyare online, laakiin sida la soo dhaafay ilaa iyo inta kuwanu waa xiiso leh iyo madadaalinta noocan oo kale ah, casino ku caashaqay haysan lahaa dhibaato!
ciyaarta Afyare waxa uu leeyahay gameplay xiiso leh interface a siman taas oo ka dhigaysa xitaa more raaxo u leh ciyaartoyda casino. Waxay leedahay RTP ah 96.02%.
Duuli Iyadoo Jinku In Goldwyn ee Jinku naadi!!
Goldwyn ee Jinku naadi waxaa si qurux badan loogu talagalay 5 duntu oo ay la socdaan 3 saf iyo 20 paylines go'an. The duntu dahab ah oo si qurux badan ayna miiqdaan badan screen iyo hortegi lahaa waxaa ka mid ah, undergrowth cufan kaynta khiyaali ah waxaa lagu arki karaa. The 4 walxood qiimaha sare waa Jinku quruxsan ah midabo kala duwan halka qiimaha hoose lagu matalo GEMS cagaaran, cas, pink, iyo orange.
Ka hor inta ciyaartoyda bilaabin duulaya oo dhan la cuties kuwan, waa in ay qabsato kala duwan sharadka iyaga ku habboon sida ay u baahan yihiin. Waxay taas samayn kartaa adigoo gujinaya ah “Casino Chip” icon ku taalla dhanka bidix ee shaashadda oo dhigay kara xajmiga qadaadiic in dhaxayn £ 0.10 dhan £ 250,00 per wareejin ah. Oo weliba, ciyaartoyda ayaa sidoo kale dooran kartaa, waayo, “Autoplay” shaqo taas oo ka dhigaysa gameplay ee ilaa xad raaxo leh ciyaartoyda Afyare.
Tani ciyaarta casino Mobile naadi ayaa isku darka ugu fiican ee animations oo tayo sare leh iyo soundtrack ah nasteexo.
Features Bonus caanka ah ee Goldwyn ee Jinku naadi
Respin Iyadoo laabashada Wild
Tan waxaa lagu firfircoonaan markii mid ka mid ah astaanta Respin Wild matalo on ambadeen ah 3. Ka dib markii taas oo, wax wilds caadiga ah meel kasta oo shaashadda hadda noqonaysaa 'laabashada Wilds' iyo ciyaartoyda arki doonaa giraanta lacag dhan kaalinta. By sidaas samaynaya, duntu mar kale dib-u-wareejin doonaa, laakiin jagooyinka ku qariyeen by giraan lacag ah sii joogi doonaan duurjoogta ah. Oo weliba, wax dheeraad ah dalalkan Respin Wilds meel kasta shaashadda kicin doonaa 1 Lataliyihii more. Oo, dhamaadka, ciyaaryahano waa la siin doonaa a Final Dib-u-wareejin.
Tan waxaa ku wareegsanaa shaqeysiin by dhulka of 3 ee walxood Goldwyn ee ku kala firdhi iyo Jinku in view kasta on duntu ku 1, 3 iyo 5. Ka dib markii taas oo, ciyaartoyda heli doontaa 9 dhigeeysa free oo ay la socdaan firfircoon laabashada feature Wilds iyo Respin dheeraadka Final la siiyay ciyaartoyda. Si kastaba ha ahaatee, ciyaartoyda aan dib-u-dhaqaajiso karaa wax dhigeeysa dheeraad ah oo lacag la'aan ah lagu jiro wareega this.
Goldwyn ee Jinku naadi waa mid ka mid ah booska ugu wanaagsan ee Mobile naadi casino horumariyo by 'Just for the guul' bixiyaha software. Waxay leedahay cadow dhexdhexaad ah iyo mid ka mid tuujin karaa Ghanna ugu badnaan 500 qadaadiicda soo baxay booska this.